Fikirka Farmaajo iyo Ficilkiisa Wax Qabad | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Ubaxyada Sahlan iyo Kuwa Isku Dhisan
Fikirka Farmaajo iyo Ficilkiisa Wax Qabad
Ismaaciil Ibraahim Hassan — March 1, 2020
Madaxweyne farmaajo muxuu kaga duwanaan karaa madaxdii hore ee dalka soomaray? Dowladihii kumeel gaarka ahaa ee lagu soo dhisay magaalooyinka Carta Nairobi iyo Jibouti, 17sano ka dib waxaa la doortay 8dii febraayo 2017 madaxweyne Maxamed Cabdilaahi farmaajo.
Waxaana doorashadiisii soo dhaweeyey kuna farxay dadyow fara badan iyo qaybaha kale ee bulshada, waxaana madaxweyne farmaajo ficilkiisa ugu horeeyo lagu tilmaami karaa isagoo heysto taageero shacab tii ugu badnayd oo uu kaga duwanyahay madaxdii asaga ka horeysay hogaanka dalka.
Hadaba Madaxweyne farmaajo muxuu uu farqi ahaan kaga duwanaan karaa madaxdii ka horeysay?
Mudane Maxamed Cabdilaahi farmaajo waxaa dhaqan ahaan lagu tilmaamaa in uu yahay nin feker fiican qaba oo wax qabadkiisu kaliya aysan ahayn sidii uu kursiguu ku fadhiyo lacag ugu heli lahaa, waana muwaadin ay ku weyntahay Soomaalinimada iyo wadaniyadda taasna waxaa kuu qireyso in madaxweynuhu uu iska badalay dhalasho uu ka heystay Mareykanka.
Madaxweyne Maxamed Cabdulaahu farmaajo dadka siyaasada dhiraan dhiriya waxay tilmaameen inuu yahay hogaan raba in Soomaaliya lagu dhaqo aragtida kala dambeynta iyo sinnaanta, waxaana taas kuu qireyso in reysul wasaare Xasan Cali kheyre markuu u dooranaye xilka ku xigeenimo uu balan qaaday in ay noqon karaan dad is faham iyo saaxiibtinimo kuwada shaqeeya.
Waxaana maanta muuqata in madaxweyne farmaajo uu ka dhabeeyey balan qaadkiisii wada shaqeyneed ee reysul wasaarihiisa Kheyre, iyadoo la wada ogsoonyahay madaxdii Maxamed Cabdilaahi farmaajo ka horeysay in watqigooda ugu badan uu kaga lumay khilaaf gudahooda ahaa iyo mooshin aan kala go’ lahayn oo ay ka gudbin jireen baarlamaanadii waagaasi jiray.
Maanta waxaa inoo muuqata is faham siyaasadeed oo madaxdii qaranka ay isku maamulayaan hal aragti iyo hal hogaan taasoo meesha ka saareysa is barbar yaacii faraha badnaa ee dowladihii ka horeeyey dowladan uu hogaaminayo madaxweyne farmaajo.
Waxaana guul siyaasadeed lagu tilmaami karaa iyadoon wali la sheegin in uu isku dhac dhex maray madaxdan hadda hogaanka inoo heyso. Waxaana door fiican la orankaraa in dowladan ay muhiimada ugu badan siiso sidii ay kaga hor tagi lahayd dadka abuuri kara isku dhac siyaasadeed oo ay ugu horeeyaan madaxda qaar ee maamul goboleedyada dalka.
Ficil ahaan madaxweyne farmaajo yaa lays orankaraa lagana ag dhaweynkaraa fikirkiisa maamuleed.
Hadba fikir ama ficil ee madaxweyne walba ee soo maray dalkeena Soomaaliya waa ay kala duwanyihiin iyadoona madaxweyne farmaajo siyaasiyiin badan ku dhaleeceeyaan in uu la feker yahay Maxamed Siyaad Barre, oo ahaa madaxweynihii dowladii kacaanka ee wadanka dhan majaraha u heysay inkastoo Farmaajo la sheegay in uu yahay kaligii talis jecel in aragtidiisa lagu dhaqmo, ayaa hadana Farmaajo u muuqdaa in uu ka feker wanaag sanyahay madaxdii isaga ka horeysay.
Waxaana taasi lagu qodobeyn karaa, sida Farmaajo u diidanaa masuq maasuqa isagoo sheegay markii uu musharaxa ahaa inuu wax ka qaban doono masuq maasuqa, inkastoo taasi uu kari waayey hadana lama sheegin madaxda hada talada heyso oo xoolo hantiyadeed lunsaday iskaba daayee waxaa muuqata badhaadhihii Soomaliya deynta looga cafin lahaa, taasna waxaa la orankaraa waa guul siyaasadeed oo Soomaaliya iyo madaxdeena qarankana ay ku faani karaan.
Hadaba Madaxweyne 8madaxweyne oo isagu ka horeysay, muxuu kaagala duwan yahay adigaas akhrinaya maqaalka?
Tags: Fikirka Farmaajo iyo Ficilkiisa Wax Qabad
Next post Maxaad Ka Taqaanaa Maadada Barashadeeda Ay Ka Siman Yihiin Dhammaan Ardayda Daraaseeyso Jaamacaddaha?
Previous post Waa Kee Amiirka Lagu Shaneeyo Qulafaa’ul Raashidiin?